Tesco 44 Oriri Ọkụkọ 1Kg | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco 44 Battered Chicken Dippers 1Kg– Ordrs
Tesco 44 Oriri Ọkụkọ 1Kg
Achịcha na-edozi ma na-edozi ara ọkụkọ na mkpuchi batter.
Ndị na-eri nri ọkụkọ na-atọ ụtọ bụ ezigbo ezinụlọ ọfụma ma ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ya. Fuss n'efu, nri ngwa ngwa maka agụụ na-agụ agụụ n'oge oge. Mere na 100% obi ọkụkọ ara dippers na ntekwasa na a ìhè na crispy batter. Esi nri si na oyi kpọnwụrụ naanị n'ime nkeji iri na asaa wee jiri ọgwụ a na-eme teatime, ahịhịa pois na bekee nke ketchup. Dippable na dunkable, ikpo a nnukwu efere nke dippers na a nhọrọ nke dips maka ezinụlọ n'abalị na na a nkiri. Ndị na-eri nri a na-eso ihe ọ bụla site na BBQ na-atọ ụtọ na tomato ketchup na Mayonezi. Ejiri 17% anụ ọkụkọ mepụta ngwaahịa a ma mepụta ya na UK na enweghị nri ekpomeekpo, agba ma ọ bụ ihe nchekwa.
Mere na 100% ọkụkọ ara tinye ke ọkụ, crispy batter